Neodymium Magnets mpanamboatra & mpamatsy - China Neodymium Magnets Factory
Neodymium Magnet tsy ara-dalàna miaraka amin'ny Black Epxoy Coating
Neodymium Irregular Magnet dia endrika namboarina. Afaka mamokatra sy milina habe samihafa izahay araka ny takian'ny mpanjifa.
Neodymium Block Magnet, Rectangular NdFeB Magnet N52 Kilasy
Neodymium Block / Rectangular Magnets dia manana hery manintona lehibe tokoa noho ny hakitroky ny angovo avo be. Manomboka amin'ny N35 ka hatramin'ny N50, manomboka amin'ny N Series ka hatramin'ny UH Series isaky ny fangatahana.
Neodymium Disc Magnets, Round Magnet N42, N52 ho an'ny Electronic Applications
Disc magnets dia boribory amin'ny endriny ary faritana amin'ny savaivony ho lehibe kokoa noho ny hateviny. Izy ireo dia manana velarana malalaka sy fisaka ary faritra misy andriamby lehibe koa, ka mahatonga azy ireo ho safidy mety indrindra amin'ny karazana vahaolana mahery sy matanjaka.